Nepal Samaya | तीर्थराज बस्नेत
किन मौन छन् कांग्रेसका 'प्रभावशाली' यी नेता?
राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही नेताहरूको चासो कम सुनिन्छ। मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र कुटनीतिक मुद्दाबारे चर्का विवाद र बहस भइरहँदा पनि उनीहरूको मौनता छ।
बुधबार, असार ८, २०७९
६ महिनादेखि कसले हेर्दैछ कांग्रेसको वासलात?
कांग्रेसका नेताहरुले 'फेस सेभिङ'का लागि पार्टीले एमसीसी परियोजनालाई टुंगोमा पुर्‍याएको, स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दा बढी समय खर्चिएको बताउने गरेका छन्। तर, लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनपरेको कारण देखाएर विधान मिच्‍ने सुविधा भने हुँदैन।
सोमबार, असार ६, २०७९
उपेन्द्रको एकलौटीले विभाजनको बाटोमा जसपा
जसपाबाट ठाकुरको बहिर्गमन पछि यादव मात्रै पार्टीको अध्यक्ष छन्। सोही कारण भट्टराई पक्षले दुई जना अध्यक्ष हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। तर, यादव भने पार्टीमा एकल अध्यक्षात्मक प्रणाली चाहान्छन्।
मंगलबार, जेठ ३१, २०७९
बाक्लियो वाम भेटघाट, कांग्रेस भन्छ- धोकाको भाग २ नलेख्न आग्रहमात्र गर्न सक्छौँ
राजनीतिक लाभहानीको हिसाबकिताब गरेर माओवादी जता ढल्किन्छ, पासा त्यतै पल्टिने अवस्था छ। त्यसकारण पनि एमाले-माओवादी नेताहरुको भेटले राजनीति तरंगित बनाइदिएको छ।
देउवाको तजबिज नमिल्दा सचेतक र दलको उपनेता चयन अन्योलमा
संस्थापन समूहभित्र पुष्पा भुसाल र मिन विश्‍वकर्माको चर्चा छ। तर, उहाँहरु सर्वस्वीकार्य नभएकोजस्तो देखियो। बाँकी शेरबहादुर दाइले क-कसलाई आश्वसन दिनुभएको छ, उहाँको तजबिज नमिल्दा समस्या भएको देखिन्छ।
सोमबार, जेठ ३०, २०७९
किन बिर्सियो कांग्रेसले नीति महाधिवेशन?
महाधिवेशन अन्तर्गत भएको नेतृत्व चयनको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै कांग्रेसका महामन्त्रीमा चुनिएका युवानेताद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नीति महाधिवेशनलाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राख्ने बताएपनि यो विषय कांग्रेसमा गौण बनेको हो।
मंगलबार, जेठ २४, २०७९
स्थानीय निर्वाचनको परिणामबारे कुन दलको समीक्षा कस्तो?
एमालेभित्र अहिले तीन विषय चर्चामा छन्। पहिलो-पालिका नेतृत्वमा पराजित भए पनि लोकप्रिय मत पाएको दाबी सहितको आत्मसन्तुष्टि। दोस्रो- हारको प्रमुख कारण गठबन्धन, धाँधलीको आरोप। र, अन्तरघात अनि अनुशासनको प्रश्न।
आइतबार, जेठ २२, २०७९
सर्वेक्षण पाखा पार्दा काठमाडौंमा कांग्रेसलाई अप्रिय परिणाम
उम्मेदवारको मनोनयनभन्दा केही समयअघि गरिएको सर्वेक्षणले स्थापित विजयी हुने देखाएपनि उम्मेदवारी मनोनयनपछिका दिनमा उनी निरन्तर विवादित हुँदा बालेनले 'क्यास' गरेको र त्यसले उनको जित सहज भएको काठमाडौं कांग्रेसका ती नेताको विश्लेषण छ।